Maevatanàna: lehilahy voalaza fa dahalo matin’ny fitsaram-bahoaka | NewsMada
Maevatanàna: lehilahy voalaza fa dahalo matin’ny fitsaram-bahoaka
Olona efa ho telon-jato no nitangorona nitokona sady nitabataba teo anoloan’ny biraon’ny miaramila sy biraon’ny kaominina, tokony ho tamin’ny 10 ora teo, tany Madiromirafy Maevatanana, ny faran’ny herinandro teo.
Fantatra fa olona nitaky ny hamaliana faty ny havany matin’ny olona tany an-toerana noho ny fitsaram-bahoaka ireo. Mitaky ny hanaovana fitsaram-bahoaka ny nahafaty ny havany koa ireo olona ireo.
Voatery niditra an-tsehatra ny mpitandro ny filaminana sy ny ben’ny Tanàna tao Madiromirafy nanazava tamin’ireo olona ny tokony hataony. Nandà hatrany ireo olona an-jatony, lasa nandeha nody ihany, saingy nanao vava ny hanao fitsaram-bahoaka ireo olona nahafaty ny havany.
Ny alina taorian’izay, nisy nanaparitaka trakta tao an-tananan’i Madiromirafy nilaza fa hanafika ireo olona anjatony ireo. Miaina ao anaty tebiteby ny mponina any amin’iny faritra iny taorian’izay.
Rangahy nitondra basy
Raha tsiahivina, ny tapa-bolana lasa teo, nahita olona iray nitondra basy teny an-tsaha ny fokonolona tao amin’ny fokontany Ambodirano ka nosamborin’izy ireo ilay lehilahy. Nentin’ireo olona hanaovana fitsaram-bahoaka ka hoe hodoran’izy ireo velona, saingy tafaporitsa ihany izy. Raikitra ny fifanenjehana, ka efa teny am-pelatan’ny miaramila tao Madiromirafy ilay rangahy no tratra kanefa mbola tratran’ny fitsaram-bahoaka ihany. Tsy nanaiky rehefa nahare izany kosa ny fianakavian’ny maty. Izay no nitarika ny fikasan’ireo olona efa ho telon-jato hanafika tanàna. Misavoritaka ny any an-toerana amin’izao fotoana izao. Efa miandriandry ny mpitandro filaminana andaniny.